यहि महिना सञ्चालन हुने भयो कक्षा १२ को परीक्षा ! – List Khabar
Home / समाचार / यहि महिना सञ्चालन हुने भयो कक्षा १२ को परीक्षा !
यहि महिना सञ्चालन हुने भयो कक्षा १२ को परीक्षा !
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 77 Views
काठमाडौँ – कोभिड–१९ को उच्च जोखिमका कारण अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको कक्षा १२ को परीक्षा भदौ अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई प्रवेशपत्रका आधारमा खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि बोर्डले परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बोर्डका सदस्य सविच दुर्गा अर्यालले बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
Previous पब्जी खेल्दा आमाको बैंक खाताबाट १० लाख चट! बाबुले दिए प्रहरीमा छोरा बिरुद्ध उजुरी, घटना के हो?
Next १४ बर्षकी छात्राले परिक्षामा याै/न शिक्षाबारे यस्तो लेखेपछि सामाजिक संजालमा भयाे भाइरल ।